2 वर्ष3महिना पहिले #501 by Dariussssss
FREIGHTERS हालको लामबद्ध बिस्तारै बाहिर phased भइरहेको संग, म यी चरा लागि भविष्यमा के, भटक थियो? B747,757,767 जस्तै विमानहरू ... A300,310 उत्पादन मा अब हो, र यो अत्यधिक Boeing र Airbus दुवै 787,777-एक्स, A330Neo र A350 को माल ढुवानी गर्ने जहाज संस्करण लागि जानेछ असम्भाव्य छ, त्यसैले म तिमी मान्छे यसलाई के लाग्छ, सोध्न चाहन्छु त्यहाँ FREIGHTERS लागि कुनै पनि भविष्य छ?
विद्यमान FREIGHTERS अन्तिम सेवानिवृत्त हुँदा के हुनेछ?
तपाईं Boeing वा Airbus हालको विमानहरु को कुनै पनि साथ FREIGHTERS लागि जानेछ लाग्छ?
2 वर्ष3महिना पहिले #502 by Gh0stRider203
हे मित्र, तपाईं र अधिक गलत हुन सकेन
को 747 अझै पनि धेरै (दुवै PAX र कार्गो) उत्पादन मा धेरै छ, र 777 एक माल ढुवानी गर्ने जहाज संस्करण साँच्चै छ। वास्तवमा, 129 777Fs फरवरी को रूपमा वितरण गरिएको छ। को 767 पनि FedEx को माल ढुवानी गर्ने जहाज संस्करण को एक पुरा crapload आदेश संग, उत्पादन मा अझै पनि छ
2 वर्ष3महिना पहिले -2वर्ष3महिना पहिले #503 by Dariussssss
... ओह राम्रो, म हुँ अनुमान।
को Boeing वेब साइट वरिपरि केही खोज पछि, म साँच्चै गलत ... म मतलब, एक लाइन अप ... राम्रो Boeing गरेको के थियो भन्न छन्। अन्य पक्ष Airbus छ मा ... म तिनीहरूलाई लागि सही थियो अनुमान ...
2 वर्ष3महिना पहिले #508 by Gh0stRider203
हाँ, Boeing राम्रो उत्कृष्ट छ। वास्तवमा, हामी अब तिनीहरूलाई दुइ बी-29s उडान धन्यवाद छ।
सबैभन्दा लामो समय को लागि यो केवल "fifi" थियो, तर Boeing गरेको कन्सास बोट धन्यवाद, "डाक्टर" पुनःस्थापित भएको थियो र अब फेरि उडान छ। रोचक कुरा ..... त्यही बोट छ ... डाक्टर गरेको जन्म ठाउ थियो। वास्तवमा, मूल डाक्टर निर्माण गर्न मदत गर्ने ती केही मूल हावा फिर्ता डाक्टर राख्न वर्तमान Boeing कर्मचारीहरु सँगसँगै काम
तपाईं बताउन सक्नुहुन्छ मलाई राम्रो नराम्रो गधा छैन
2 वर्ष3महिना पहिले #511 by Dariussssss
म Airbus आफ्नै विमानहरु मा सम्भावित देख्न सक्नुहुन्छ कि बस छक्क छु, यो A350 र A380 सबै को सबै भन्दा। म 747 खराब वा कुरा हो भन्दै छैन छु, तर पूर्ण आकार, डबल-तल्ले माल ढुवानी गर्ने जहाज अचम्मको हुनेछ। कि एक अविश्वसनीय दायरा, 8 500 एनएम थप्न, त्यसैले गरेको एक 1000 कम एक माल ढुवानी गर्ने जहाज संस्करणमा भन्न गरौं, कि अझै पनि एक राम्रो गम्भीर दायरा छ।
म सिर्फ यो बुझ्न सक्दैन ... तिनीहरूले केही PAX-माल ढुवानी गर्ने जहाज कार्यक्रम बारे, कार्गो अवस्थित PAX विमानहरु रूपान्तरण गर्न .... कुरा गर्दै छन् र बारेमा A340-500 फा सोच मलाई पायो ... कि गधा कसरी खराब छ? म यू सम्झना भने एमडी-11, यो एक PAX विमान रूपमा प्रकोप थियो, तर ठाँउ-मा एक माल ढुवानी गर्ने जहाज रूपमा मतलब।